Aza Manasaritaka Ny Vehivavy Ejipsiana! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Desambra 2012 8:27 GMT
Vakio amin'ny teny Español, বাংলা, Ελληνικά, polski, Français, Italiano, 日本語, Aymara, English
Maryanne Gabbani, Kanadiana nivoaka an-tanindrazana sady bilaogera, namoaka lahatsoratra bilaogy vaovao nitondra ny lohateny hoe “Aza Manasaritaka ny Vehivavy Ejipsiana” hanaovany fanamarihana tantara roa henony vao haingana, izay nitranga tao amin'ny tanàna kely onenany.
Tahaka ny hoe nisy vondrona Takfir wal Higra (Fandroahana amin'ny Fiarahamonina sy Fandosirana) nandeha tao amin'ny faritra misy anay hanampy ny mponina ao an-toerana hitondra tena ho amin'ny “mety” kokoa. Nandehandeha teny an-dalana amin'ny galabeyas (fitafy nentin-drazana) fohy ry zareo ary naka moskea iray ho fitorian-teny teny sy birao iray tao Abu Sir ho amin'ny fandrindrana. Tokotokony ho herinandro eo ho eo izay, nisy valo lahy niditra tao amin'ny souq [tsena an-kalamanjàna] lehibe indrindra tao Abu Sir ary rehefa niditra tao dia nahamarika vehivavy iray nipetraka teo anilan'ny entambarony sady somary mampiseho tongotra avy ao amin'ny galabeya anaovany. Nodakadakàn-dry zalahy mafy ny tongony, noteneniny mafy ravehivavy hitafy tsara sy ho maotona. Fahadisoana lehibe anefa iny. Raha nitranga izany, io vehivavy io no lehiben'ny vehivavy ao amin'ny souq sady mpikambana ao amin'ny foko lehibe ao amin'ny faritra izay mahatratra an'arivony ny isany. Notafihan'ity vehivavy ity sy ny vehivavy hafa ao an-tsena izy valolahy ary nidaroka an-dry zalahy mafy tokoa hany ka voatery nandeha tany amin'ny hopitaly. Raha niezaka ny hanome ho an'ny polisy ny antonta-kevitry ny fanafihana ireo lehilahy ireo dia nandà tsy nety nandray ny antonta-kevitra ny polisy, nilaza fa tsy hanenjika ireo vehivavy ireo…hoe adala ve ireo lehilahy ireo? Hany ka amin'izao fotoana izao dia ataon'ny tanoran'i Abu Sir ho toera-pisotroana dite ny birao ary tsy nampiasain-dry zareo hanaovana toriteny fondamentalista intsony ny moskea ary efa elaela no tsy nahitana intsony ny vondrona Takfir.